Odinga ukukwazi ngoSemalt
Namuhla, kunzima ukuthola umnikazi wesayithi ongeke ezwe ngoSemalt. Ngoba ngandlela thile, abantu kufanele babhekane nokwenza kahle kwe-SEO. Ukuphakanyiswa kwewebhusayithi kwenjini yokusesha iba yisihloko okuxoxwe kakhulu kuso. USemalt uzisungule njengomholi ekukhuthazeni iwebhusayithi futhi ubelokhu ekhombisa ukuphakama kwayo kule ndawo iminyaka eyishumi.
Lawa akuwona amagama ayize, wonke amaqiniso aqinisekiswa yinkomba yenani lokuphothulwa kwamaphrojekthi ngempumelelo. Amakhulu amakhasimende abhala umbiko omuhle ngokusebenza nathi ngoba izinkampani zawo zagcina ziqala ukuchuma. Bonke abancintisana bashiywe kude ngaphandle kwethuba elilodwa lokuthola isikhundla sabo ku-injini yokusesha. Kucaca ukuthi ukwenziwa kwe-SEO akunakwenzeka ngaphandle kweSemalt, lokhu kukhethekile kwethu lapho ochwepheshe bezinga eliphakeme bethatha izintambo. Ngaphandle kwalokho, asinaso isikhathi sokuphumula kulokho okufakayo, sithuthukisa izindlela zethu nsuku zonke ngokunikeza abathengi ubuchwepheshe be-SEO obusha. Siyavela, futhi ibhizinisi lakho liyakhula nathi.
Kufanele sikhokhele ithimba lethu ithimba, eliqukethe abaphathi abanolwazi, ochwepheshe be-IT, ochwepheshe be-SEO, ababhali bamakhophi nabaphathi bezokumaketha. Singakuqinisekisa zisuka nje, akukho ndawo yabadayisi eSemalt. Uchwepheshe ngamunye unolwazi olunzulu ekuphakanyisweni kwe-SEO, okwazi ukucabanga okuhlelekile futhi okuhlala kugxilwe empumelelweni.
Bheka amacala wangempela avezwe kwiwebhusayithi yethu. Uzoshaywa yinombolo yeziza esizikhiphile ezinkingeni ezinkulu. Sisebenza nanoma iyiphi iwebhusayithi futhi siyisindise ekuweni okuzayo. Mhlawumbe, abantu abaningi banentshisekelo ngamasu nezinqubo zomsebenzi wethu. Le ndatshana izokutshela ukuthi sikwazi kanjani ukuba semaphethelweni aphezulu, nokuthi kungani iSemalt ukuphela kwenkampani eqinisekisa impumelelo yakho.
Igama elithi SEO lisetshenziselwa ukubhekisa amandla wewebhusayithi ngenxa yezidingo zezinjini zokusesha. Isibonelo, ngemuva kokudala izinsiza eziku-inthanethi ezenzelwe ukuthengiswa kwento ethile noma insizakalo ethile, kuyadingeka ukuletha imininingwane ngayo enanini eliphakeme lamalungu ezilaleli ezihlosiwe.
Ngisho nalabo basebenzisi abafuna imikhiqizo enjalo noma izinsizakalo ngeke bakwazi ukubabona emiphumeleni yokucinga kuze kube yilapho iwebhusayithi isemakhasini angaphambili enjini yokucinga. Ungakufeza lokhu nge-SEO optimization. Ngenxa yokuthi abathengi banda ngokuthenga izinto nezinsiza kwi-Intanethi, noma yiliphi ibhizinisi manje lidinga ukukhushulwa kokucinga.
Zonke izindlela ezisetshenziselwa ukukhuthaza i-SEO iwebhusayithi kuwebhusayithi yomhlaba ihlukaniswe izindlela zangaphandle nezangaphakathi. Esimweni sokuqala, imisebenzi yenziwa kusetshenziswa izinsiza eziku-intanethi ezivela eceleni, ezesibili - ngaphakathi kuwebhusayithi. Inhloso enkulu yokwenza kwangaphandle ukushicilela okuqukethwe kwayo ngaphandle kwewebhusayithi yenhlangano. Lokhu kuhlinzeka ngethrafikhi eningi nomthombo owamukelekile wezixhumanisi zewebhusayithi ethuthukisiwe, futhi kufaka isandla ekuthuthukisweni kwezikhundla enjini yokucinga. Izinkomba eziphambili zalolu hlobo lwenyuso:
ukushicilela ukukhishwa kwezindaba nezindatshana ezisekelweni ze-intanethi zabanye abantu.
Ukusebenza kwe-SEO kwangaphakathi kwewebhusayithi kubandakanya izinhlobo ezilandelayo zomsebenzi:
Ukwakha okuqukethwe okungafani nalutho oluphezulu;
Ukukhetha amagama okhiye afanele futhi uwathumele ngokulinganayo emibhalweni.
Yini uSemalt ayinikezayo
Sakhe iqoqo lezinyathelo okuhloswe ngazo ukwandisa ukuthengiswa kwesiza sakho nokubonakala kwaso. Le misebenzi emibili edingekayo ichaza ukunyuswa kwe-SEO. Ukhuphula ukusebenza kahle kwezinto, kusungulwe izixazululo ezihlukile - i-AutoSEO ne-FullSEO. Le yimikhankaso ekhethekile lapho ungafinyelela imiphumela esikhathini esifushane kakhulu. Ngaphezu kwalokho, sizobacabanga kahle, kepha manje ake sibheke ukuthi uSemalt wenzani ngempela. Nakhu ukusikisela kwethu okuyinhloko:
ukusebenza kweinjini yokucinga;
Ividiyo yokuphromotha yebhizinisi lakho.
Umkhankaso we-AutoSEO kaSemalt
I-AutoSEO inombolo yezinyathelo ezithathiwe ukubeka iwebhusayithi yakho endaweni ephezulu yenjini yokusesha. Kubaluleke kakhulu ukuqonda le ndlela kahle. Lokhu akuyona i-magic magic, kepha izinhloso zenkampani yethu ngaphakathi kohlaka lwe-SEO-optimization. Kholwa, ukuba khona kwepani akuqinisekisi isobho elimnandi, ngakho-ke umsebenzi uhlanganiswa nabachwepheshe bezinto ezihlukile. Umkhankaso we-AutoSEO ungakhiqiza kuphela ngokubambisana kwamakhasimende okusebenzisana neqembu leSemalt. Nakhu i-AutoSEO efaka:
Ukukhetha amagama agqamile afanele kakhulu;
ukuguqulwa kwamaphutha wewebhusayithi;
ukwakha izixhumanisi kumawebhusayithi ahlobene ne-niche;
Manje bekezela ubone ukuthi kubukeka kanjani ekusebenzeni. Konke kuqala ngokubhalisa kwiwebhusayithi yethu. Ngokulandelayo, konke kwenziwa ngumhlaziyi wesayithi, obheka ngokucophelela ukwakheka kwewebhusayithi ngokuya ngamazinga we-SEO. Uthola lonke ulwazi oludingekayo ngesimo semibiko enohlu lwamaphutha okumele alungiswe. Ngokusekelwe ekuhlaziyweni, unjiniyela we-SEO unquma amagama angukhiye afanele angakhulisa ithrafikhi yokuhambela iwebhusayithi.
Isinyathelo esilandelayo ukufaka izixhumanisi ze-inthanethi kwizisetshenziswa ezahlukahlukene ze-intanethi. Okuqukethwe kufanele kuhambisane nezixhumanisi futhi kuphathe inani le-semantic. Inqubo ibhekwa njalo ngumphathi wethu, olandelela indawo yokuxhumeka kunjini yokusesha. Ngeke uze ukhathazeke ngokuthile, konke kulawulwa ngokuphelele kulo mkhankaso. Izinsizakalo zokuxhumeka ku-inthanethi zikhethwe ngokunemba okukhulu, ngakho-ke amathuba okuthola uhlu olungenayo awafakiwe.
Ngokufinyelela ku-FTP (I-File Transfer Protocol), ochwepheshe bakwaSemalt benza izinguquko ezithile eziboniswa ekuqaleni kombiko wewebhusayithi. Lezi zinguquko ziholela kwinqubo yokwenza iwebhusayithi. Imisebenzi kaSemalt kulesi sigaba ifaka phakathi ukuvuselelwa kwesikhundla nsuku zonke, ngokungenisa amagama angukhiye amasha ahambelana nokuqukethwe. Inzuzo ye-AutoSEO ukuthi umkhankaso wenziwa ngokubandakanyeka okuncane noma akukho komsebenzisi, kepha uhlala usesikhathini nakho konke okwenzekayo. Iphakethe le-AutoSEO lenyanga libiza u- $ 99.
Ukuze uqonde kangcono lolu hlelo lokusebenzisa i-SEO, sikunikeza ukuthi uzijwayeze nezinqubo ze-FullSEO, ezihlose futhi ukukhuphula isilinganiso sewebhusayithi enjini yokusesha. Umehluko nge-AutoSEO ukuthi umphumela utholakala ngesikhathi esifushane. Isisekelo ukusetshenziswa kwangaphakathi nangaphandle, okwenziwa uchwepheshe we-SEO. Ngenxa yalokhu, umkhankaso we-FullSEO ngeke uvumele kuphela ukuthi uthathe isikhundla sokuhola esigabeni semakethe, kodwa futhi ucindezele abancintisana kakhulu.
Izici zomkhankaso we-FullSEO
Umkhankaso we-FullSEO uqala kusukela lapho ubhalisa. Ukuhlaziywa ngokuphelele kwesakhiwo sewebhusayithi kwenziwa, ngokukhishwa kombiko olandelayo. Okulandelayo, uchwepheshe we-SEO wenza isisombululo se-semantic sesayithi lakho, uhlola ukucushwa futhi akhombe umgogodla we-semantic. Njengomphumela wokuhlaziywa, akhonjwa onke amaphutha adinga ukulungiswa ukuze kuqhutshekwe nenqubekela phambili. Ngemuva kwalokho kuyithuba lokuchaza amagama angukhiye afanele ukwandisa ithrafikhi. Ngakho-ke, isiza sithuthukiswa ngaphakathi kuzo zonke izigaba. Ngemuva kokuthola i-FTP, uchwepheshe uzokwenza izinguquko ezidingekayo ezichazwe embikweni.
Isinyathelo esengeziwe kuzoba ukwenziwa kwangaphandle. Ochwepheshe be-SEO bazofaka izixhumanisi kwizinsizakusebenza ze-niche ezibonisa umongo wokuqukethwe kwakho. Ngokuhamba kwesikhathi, lezi zixhumanisi zizoqala ukuletha imiphumela emihle kuwebhusayithi. Ku-akhawunti ye-Semalt, kunenombolo enkulu yeziza eziqinisekisiwe ongasebenza nazo ngokunenzuzo, konke ukuzuzisa ukusebenza ngempumelelo kwesiza sakho. Umkhankaso we-FullSEO ubuye ungaphansi kokuqashwa ochwepheshe njalo, kunokuvuselelwa ngezikhathi ezithile kwamagama angukhiye, uma kudingeka. Ukuze uhlale usesikhathini nazo zonke izinguquko nokukhula kwesilinganiso sesiza, kunikezwa imibiko eningiliziwe ngesimo sewebhusayithi yakho enjini yokucinga. Le nqubo ihamba ubusuku nemini, ngakho-ke akunakwenzeka ukuthi ungaphuthelwa noma yimuphi umzuzu obalulekile.
Kwesinye isikhathi kwenzeka ukuthi ngesizathu esithile kufanele umise okwesikhashana ukuphakanyiswa kwe-SEO. Kulesi simo, i-Google imvamisa isusa yonke i-backlinks kusuka kungobo yomlando yedatha ngemuva kwesikhashana. Amasheya ngokwemvelo azoqala ukuwa ngokushesha, kepha ungakhathazeki kanzima, azohlala esesimweni esithile noma kunjalo. Lesi sikhundla sizophakama kakhulu kunaleso ebesingaphambi kokuqalisa umkhankaso we-FullSEO. Ngokuvamile, noma yikuphi ukusebenza kwe-SEO kungumuntu ngamunye, ngakho-ke kunzima ukuthola inani lomkhankaso we-FullSEO ngaphambi kokuthi uchwepheshe we-SEO abuke iwebhusayithi yakho ngokuningiliziwe.
USemalt futhi unikeza ukwenziwa kwe-SEO ngokusebenzisa ama-Analytics. Ngamanye amagama, kuyisevisi yokucwaningwa kwamabhuku okuningiliziwe kwewebhusayithi ngokwenziwa kombiko onemininingwane. Qaphela ukuthi ngaphezu kokucwaningwa kwendawo okuqondiswe kuyo, ihlaziya izingosi zabaqhudelana, iqoqe amagama angukhiye wokwakha umongo we-semantic kuwebhusayithi, kanye nokwakha izinga lemikhiqizo encintisanayo. Ukuhlaziywa kuhlinzeka okulandelayo:
isiphakamiso segama elingukhiye;
simo segama elingukhiye;
ukuhlaziya isikhundla samagama angukhiye;
Ukuqoqwa kwemininingwane yokuhlaziya kuqala ngokushesha nje lapho ubhalisa kwiwebhusayithi yethu. Lokhu kwenzeka ngokuzenzakalelayo, noma nini lapho ugcwalisa iqoqo lakho ledatha, uthola umbiko oveza ngokucacile isikhundla sangempela sewebhusayithi yakho. Izindawo zamancintisana nazo ziyahlaziywa, futhi nawe uthola lonke ulwazi mayelana nezikhundla zabo. Izindinganiso ze-SEO ziyabukwa ngenkathi kwakhiwa isakhiwo sesayithi, ngakho-ke uthola izinguquko ezenzelwe ukuhlelwa kabusha kwakho uma kudingeka.
Uma usuvele unayo i-akhawunti evumelekile, ungangeza noma iliphi inani lamasayithi kwikhabhinethi yakho yangasese. Zonke izingosi zizohlaziywa ngokufana. Ukuhlaziywa kokuqala kukhombisa ukuthi yimaphi amagama okhiye ongawasebenzisa. Isistimu ikhetha ukusebenza kuphela ngamagama okhiye wokuqukethwe. Okusho ukuthi, wonke amagama azoba nomphumela onenzuzo ekukhuleni kokubakhona kwesayithi. Ungasusa noma ungeze amanye amagama angukhiye ngokubona kwakho.
Kalula ukuthi sihlaziya isiza futhi siqaphe inqubekelaphambili yaso ubusuku nemini. Kubalulekile ukuqoqa imininingwane mayelana nabantu oncintisana nabo. Uhlala wazi konke okwenzekayo kumasayithi abo, futhi abakwaSpecttics bakutshela ukuthi yisiphi isenzo okufanele sithathwe ukwedlula oncintisana naye kwinjini yokusesha. Ungasebenzisa i-Application Programming Interface (API), lokhu kukhetheka kakhulu phakathi kwabasebenzisi ngoba idatha ivumelaniswa ngokuzenzakalelayo, okuvumela ukubeka iso kukho konke ukubuyekeza. Kunamaphakeji entela amathathu atholakalayo kulesi sigaba sezinsizakalo:
STANDARD - $ 69 ngenyanga (amagama angukhiye angama-300, amaphrojekthi ama-3, umlando wezikhundla ezi-3);
I-PROFESSIONAL - $ 99 ngenyanga (amagama ayisi-1 000, amaphrojekthi ayi-10, umlando wesikhundla seminyaka eyi-1);
I-PREMIUM - $ 249 ngenyanga (amagama ayisi-10 000, amaphrojekthi angenamkhawulo).
Ekuthuthukisweni kweWebhu, uSemalt uphakamisa isisombululo esiphelele esisho ukuthuthukiswa okugcwele kwanoma yisiphi isiza sezentengiso, nokuklama izinto zaso:
ukuhlanganiswa nezinhlelo zokusebenza zeqembu lesithathu;
Uhlelo Lokuphathwa kokuqukethwe;
amamojula e-commerce akhethekile;
Ukukhiqizwa kwamavidiyo wokuphromotha
Into ebophezelekile yezinhlelo zokuthengisa ezisetshenziswayo ngenkathi kwethulwa amaphrojekthi amakhulu we-Intanethi okuthengiswayo yividiyo efingqa umongo nezinzuzo zenkampani entsha. Njengengxenye yensizakalo ye- "Promotional Video Production" uSemalt uphakamisa izindlela ezimbili zokwenza lawo mavidiyo:
ngesinqumo somuntu ngamunye (intengo ibalwa ngokwahlukana).
Ukushintshela emsebenzini wokukhokha kwenziwa kusuka encazelweni yamaphakheji wemali, ngokuchofoza inkinobho ethi "Bhalisa". Ukuthenga iphakethe lentela kungenziwa kukhiqizwe kunoma iyiphi imali yezwe. Isikhethi se-switch sitholakala engxenyeni ephezulu yefomu lokukhokha.
Ngemuva kwakho konke lokhu okungenhla, kunzima kakhulu ukungabaza ukusebenza ngempumelelo kwe-SEO ngezindlela zikaSemalt. Mhlawumbe kuvele imibuzo eyengeziwe ngoba i-athikili ayikwazanga ukumboza wonke ama-nuances wendaba ebaluleke kangako. Ngakho-ke, kungcono ukuxhumana nenkampani ngaphandle kokulibala. Kungekudala uSemalt uzizwa kuwe, ngokushesha uzoceba. Silinde wena!